I-Fjälluggla Cottage - I-Stuga Fjälluggla - I-Airbnb
I-Fjälluggla Cottage - I-Stuga Fjälluggla
Blattniksele , Västerbotten County, i-Sweden
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Alexandre
Siphakamisa umqondo wangempela onikeza ukunethezeka okukhulu. Kungakhathaliseki ukuthi ungumbhangqwana noma umndeni, ufuna ukuzimela endlini encane ethokomele, bese uthatha ikhefu ku-Stuga Fjälluggla yethu. Ngendawo engu-55 m2 eklanyelwe ukuhlalisa abantu abangu-4 izokunikeza indawo eyanele ukuze uzizwe uphilile ngokuphelele. Uzothola imibhede isilungile, amathawula, insipho, ukufinyelela kwe-WIFI mahhala kanye nemikhiqizo eyisisekelo yokuqala amaholide akho, njengekhofi, itiye, usawoti, upelepele, uwoyela, ushukela, imikhiqizo kanye nethawula lezitsha.
I-Fjälluggla inamakamelo okulala azimele angu-2 anemibhede engu-4 yabantu abangabodwa esingawashintsha abe usayizi wenkosi kwabashadile. Kanye nendlu yokugezela nendlu yangasese, igumbi lokudlela elihlome ngokuphelele kanye negumbi lokuphumula elibheke emfuleni, isitofu se-pellet siqedela imishini yokuchitha ubusuku obungenakulibaleka. Ithala elikhulu lizokuvumela ukuthi ujabulele ngaphandle kanye nemvelo ezungezile.
Uzojabulela indawo ezolile nenokuthula enendawo yokupaka yangasese ngokuphepha okuphelele. Abathandi bemvelo bazojabulela ukubuka izinyoni eziningi zasemanzini ezihlala nezidleke endaweni ezungezile.
Kumamitha angama-600 nje ukusuka lapha, edolobheni lemakethe laseBlattnicksele, uzothola isitolo segrosa esinakho konke ongase ukudinge kanye negalaji likaphethiloli ekupheleni kwedolobhana. Sine-kayak nezikebhe esizeni, enye indlela enhle ukubeka imoto phansi isikhashana bese uqasha esinye salezi zikebhe, sisuke ogwini lwethu ukuze sishelele emanzini futhi kungani singayi ukuyothenga endaweni. Vele uzizwe ukhululekile futhi ube nolwazi oluhlukile. Uzothola ithuba lokwenza into efanayo ngokuzihlomisa ngeskis sethu sokuvakasha esilula kakhulu se-OAK.
Yazi ukuthi sihlala esizeni futhi sikhona njalo ukukwamukela, ukweluleka futhi sikusize uma ukudinga.
Singu-Sia no-Alex, uzoza maduze eholidini nathi, yingakho besifuna ukuzethula.
Umbhangqwana wase-French Laotian, sisebenze kwezokuVakasha isikhathi eside futhi sibe nethuba lokuhamba kancane emhlabeni jikelele. Kungakho umqondo wethu wezokuVakasha kanye nendlela yethu yokukwamukela kungeyona into edlula noma iwuhlobo lokugxilisa ulwazi esinalo mayelana nokungenisa izihambi, ukuvakasha kanye nombono wethu mayelana nalo msebenzi. Konke okuhlobene nemvelaphi namasiko ethu, lokhu cishe kunikeza lapha kule ngxenye yeScandinavia indlela ethile neyingqayizivele; Ingxube yobukhona obuhlala njalo lapho uyidinga, ukuqonda lapho kudingekile kanye nokunambitheka kwemininingwane mayelana nomhlobiso wezindlu zethu.
Siyakwamukela eNyakatho yeSweden, Siyakwamukela eLapland, Siyakwamukela ekhaya lethu.
Umbhangqwana wase-French Laotian, sisebenze kwezokuVakasha isikhathi eside futh…